AirMule Drone ambulensi kwenza indiza Intombi - Izindaba Rule
AirMule Drone ambulensi kwenza indiza Intombi
ambulensi Autonomous ukuthi wathatha indiza yayo yokuqala kusebenziswe ifoni kwa-Israyeli iyakhona kokwehla esikhaleni ukuthi ezinophephela emhlane bengayi, futhi uzokwazi ngendiza abantu ababili
Lesi sihloko osesikhundleni “AirMule Drone ambulensi kwenza indiza Intombi” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesithathu 13th January 2016 12.01 UTC
A Drone ambulensi eklanyelwe ngendiza abantu ababili selithathe autonomously emoyeni ngokokuqala ngqá.
The AirMule, okungase kuthathe off nezwe zibheka, yenzelwe izimo lapho kokufika indiza kuba unfeasible - ezifana enkundleni yempi. Drone, eyenziwe yinkampani Israeli Tactical Robotics, oboné ukushiyeka yamuva ekuthuthukisweni kodwa yakhelwe ukuthwala 450kg kuze kufinyelele 31 miles.
I single-engined, yangaphakathi Rotor Drone wathatha emoyeni kusuka isikhungo sokuhlola yesikhashana wamisa at yaseMegido airfield ngemva kokuzuza imvume evela Israeli Civil Aviation Authority for indiza kusebenziswe ifoni njengemodemu.
Le nkampani uhlela khombisa AirMule sika wezimpahla esithwele khono kungakapheli nonyaka, nge ngalé-line-ka-emehlweni testing futhi okuhleliwe.
I Tactical Robotics AirMule lendiza luhlobo wamisa at yaseMegido airfield enyakatho yakwa-Israyeli. Photograph: Tactical Robotics
Nakuba yempi ukuthuthwa kwabantu ngenxa yengozi kuyinto ukuqaliswa esisobala esingafinyelelwa icwecwe Drone uhlelo, ikhono fly iseduze izakhiwo kanye nezinye obstructions ngenxa Rotor uhlelo lwangaphakathi, ulunika onqenqemeni okuphawulekayo phezu ama-ambulensi air yendabuko.
Tactical Robotics akuyona kuphela inkampani esebenza abantu esithwele drones. The Chinese Ehang 184 Umgibeli Drone kwaba kuboniswe off at CES e Las Vegas ekuqaleni kuka-January, ithwale ongashadile kuze kufinyelele 100kg ngesisindo kuze kube 23 imizuzu ngesivinini esingaba ku 63mph.
izimpi Drone: UAV Interceptor entsha saziwa ngokuthi solution inetha-labadubuli ukuba elinamandla ezindizayo
24386	1 Isigaba, drones (wezempi), drones (non-wezempi), Israyeli, Middle East naseNyakatho Afrika, Izindaba, Amarobhothi, Samuel Gibbs, Technology, izindaba World
← I Just ngabhema smartphone [VIDEO] izidakamizwa New aphatha ngayo ukucindezeleka esikhathini esingaphansi 24 amahora ! [VIDEO] →